Edemede Amar Kukreja na Martech Zone |
Edemede site na Amar Kukreja
Nnwale ndị ahịa ga-enyere gị aka ịkwado njikọta Salesforce ahaziri iche na arụmọrụ gị na ngwa ngwa ndị ọzọ. Ezi ule na-ekpuchi ihe niile Salesforce sitere na akaụntụ na-eduga, site na ohere na akụkọ, na site na mkpọsa na kọntaktị. Dị ka ọ dị na nyocha niile, enwere ụzọ dị mma (dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma) nke na-eme Salesforce ule na ụzọ ọjọọ. Yabụ, kedu ihe Salesforce na-anwale ezi omume? Jiri Ngwa Ule Kwesịrị Ekwesị - Nlele Ahịa